ကလိုစေးထူး: ပြဿနာကို ခွဲခြားလက်ခံရာတွင်…
အကိုရေ လမ်းကြောင်းမလွဲစေရပါဘူး ။ တော်တော်များများကိုလည်း ညီမ သတိပေးအကြံပြုထားပါတယ် ။ ဒါလေးက ခဏပါပဲ။ လွတ်လပ်မှုကို အလွဲသုံးစားလုပ်နေတဲ့ အဲဒီ အရူးကိုတော့ မပြောချင်တော့ပါဘူး ။ ညီမလဲ အဲဒီအမျိုးယုတ်က သိပ်လွန်လာလို့ ၊ အကျိုးမရှိတဲ့ စကားတွေနဲ့ စီဗောက်စ်ကို လိုက်နောင့်ယှက်လို့ ဘန်းထားလိုက်တယ်။ မကျေနပ်ရင် ဖင်နဲ့ခေါင်းဆောင့်သေပေါ့ ။
Dec 9, 2007, 11:47:00 PM
Begging for fighting maybe their strategy to cause confusions and lack of unity among the people. This is not new. Before the word "blog" exists, this kind of thing happened in newsgroup back in the 90s.
I wrote the same kind of feelings in one of my postings.
Dec 10, 2007, 1:44:00 AM
ရေးထားတာ ကြိုက်တယ်ဗျာ။ နောက်ဆုံးနှစ်ပိုဒ်ကလဲ စဉ်းစားစရာပါ။ သဘောတူပါတယ်။ ရှောင်စရာတွေလဲရှောင်ပါ့မယ်။
ပြီးတော့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုလုံးဝမပါတဲ့ ချစ်ချစ်ခင်ခင် သဘောထားကွဲလွဲတဲ့ ဓလေ့ ဖြစ်ထွန်းစေချင်တယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ လူငယ်တွေ ဝေဖန်ခံရမှာ ကြောက်လို့လက်ပိုက်ကြည့်နေတဲ့ ဓလေ့၊ မပြောရဲ မဆိုရဲတဲ့ ဓလေ့ မထွန်းကားစေချင်ပါဘူး။ လွတ်လပ်စွာသဘောထားကွဲလွဲရင် ကြိတ်မှိတ်အောင့်အည်းပြီး တသံတည်းထွက်တာထက် တောင် ရန်သူက ပိုကြောက်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဲဒါဆို ဘာဘဲလုပ်လုပ် အားလုံးစုပြီး Brainstorming လုပ်လို့ ရပြီလေ။ ကျွန်တော်ဆိုလိုတာက ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေမပါပဲ ဝေဖန်ဆွေးနွေးပြီး ရလာတဲ့ အဖြေကိုတော့ အားလုံးက ညီညီညွတ်ညွတ် ဝိုင်းပြီး အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရင် ပိုကောင်းမယ်ဆိုတာပါ။
Dec 11, 2007, 7:26:00 PM